Digital Patrika – अपराधी पनि भिआईपी !
अपराधी पनि भिआईपी !
किन डराउछ प्रहरी अपराधी पक्राउ गर्न ?
Feb 14, 2018digitalpatrikaदेश0
काठमाण्डौं । ज्यानमार्ने उद्योगदेखि कीर्ते सरकारी सहिछापको अभियोग र भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहरिएका नेपालका ४ जना फरार भिआईपी प्रहरीको सर्वाधिक खोजी सूचीमा छन्। फरार रहेका चारै जना भिआईपीहरू दिनहुँ कुनै न कुनै प्रहरी अधिकारीसँग सम्पर्कमै हुन्छन् तर पनि उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन। राजनीतिक दलको संरक्षण र कतिपय प्रहरी अधिकारीकै सहयोगमा उनीहरू सहजै लुक्ने गरेका छन्। प्रहरीको एक निकायले खोजी गरिरहे पनि संगठनभित्रकै केही प्रहरी अधिकारीको संरक्षणमा रहेकाले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न नसकेको प्रहरी स्रोतले स्वीकार्छ। सुडान घोटाला काण्डमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग प्रमाणित भएर अदालतले समेत सजाय सुनाएका पूर्वआईजीपी रमेश चन्द ठकुरी र गुण्डा नाईके चक्रे मिलनको हात छिनालेर सजाय तोकिएका सांसद दीपक मनाङ्गे सजाय तोकिएर पनि फरार छन्। त्यसैगरी ७ जना प्रहरीको ज्यान जानेगरी भएको कैलाली घटनामा दोषी ठहर अर्का सांसद रेशम चौधरी पनि फरार सूचीमै छन्।
त्यसैगरी प्रहरीको गोप्य रहने कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम कीर्ते गरेको अभियोग लागेर प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका ललितपुर क्षेत्र नम्बर एकका सांसद नवराज सिलवाल पनि फरार छन्। फरार चारै जनालाई खोजी गर्न प्रहरीका छुट्टा छुट्टै टोली परिचालन गरेको छर तर अझैसम्म सकैलाई पनि पक्राउ गर्न सकेका छैन। फरार सांसद सिलवाल र चौधरीलाई राजनीतिक उच्च नेताको साथ छ भने मनाङ्गे र पूर्वआईजीपी ठकुरीलाई प्रहरीलेनै संरक्षण गरेको कारण पक्राउ गर्न मुस्किल भएको प्रहरी स्रोतले दाबी गरेको छ। ‘माननीय सिलवाल र चौधरीलाई नेताज्यूहरूले काखी च्याप्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरी खटिए पनि नेताको बोली काट्न नसक्ने प्रहरी अधिकारीलेनै उनीहरूलाई बचाउँदै आएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘चौधरीलाई बचाउन प्रचण्ड र सिलवाललाई बचाउनमा केपी ओलीको हात छ, उहाँहरूका केही भक्त प्रहरी अधिकारी छन् उनीहरूलेनै कानूनले खोजेका व्यक्तिलाई लुकाउँदै आएका छन्।’ प्रहरी संगठन र केही कर्मचारीकै कारण फरार अभियुक्तहरू पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। ‘उनीहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरी पनि परिचालित छ, तर पक्राउ गर्न सकिएको छैन,’ नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘उनीहरू पक्राउ नर्पनुमा संगठनका केही कर्मचारीको मुख्य हात छ, उनीहरू के लोभमा परेका छन् थाहा छैन।’
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी मनोज न्यौपानेका अनुसार अदालतबाट सजाय सुनाएका, अदालतमा मुद्दा बुझाएर पक्राउ पूर्जी जारी गरिएका र अर्को प्रहरी अनुसन्धानमै भागेका बेला गोप्य रूपमा खोजी थालेका गरी फरार अभियुक्तलाई तीन किसिमले वर्गिकरण गरिएको हुन्छ। न्यौपानेका अनुसार मनाङ्गे र पूर्वआईजीपी ठकुरी अदालतबाट सजाय सुनाइएका फरार अभियुक्त हुन्। चौधरी अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी गरिएका अभियुक्त हुन् भने अर्का सांसद सिलवाल कीर्ते अनुसन्धानमा प्रहरी अनुसन्धानकै क्रममा भागेका कारण खोजीमा छन्।
प्रहरीको अति गोप्य रहने कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम कीर्ते अभियोग पछि छानबिनमा परेका र प्रहरी खोजीमा रहेका एमाले सांसद नवराज सिलवाल देश बाहिर रहेको हल्ला चले पनि उनी राजधानीमै लुकिछिपी बसेको प्रहरीको अनुमान छ। प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘लामो समय प्रहरीमै जीवन बिताएका सिलवाललाई प्रहरीको फन्दाबाट कसरी बच्ने भन्ने कुरा थाँहा छ, फेरि प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत खोजी गरेपछि मुलुक बाहिर हुँदा पक्राउ पर्ने भएकाले उनी रातारात देश भित्रिएको र कुनै भिआईपीकै संरक्षणमा रहेको प्रहरी स्रोतले दाबी गरेको छ। त्यस्तै प्रहरीको खोजी सूचीमै रहेका अर्का सांसद रेशम चौधरी पनि बेला बेला सुटुक्क कैलाली आउने गरेको प्रहरी स्रोतको दाबी छ। नेपाल आए पनि लामो समय नबस्ने र प्रायः जसो नेपाल भारत सीमाक्षेत्रमा बस्ने गरेको प्रहरीलाई सूचना भए पनि कतिपय प्रहरीकै मिलोमतोमा उनी बच्दै आएको स्रोतको दाबी छ। उनी भारतमा एक विदायकको घरमा बस्दै आएको प्रहरी अनुमान छ।
त्यस्तै पाटन अदालतले ५ वर्ष जेल सजाय सुनाएका मनाङका स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङ्गे निर्वाचन पछि फरार अपराधी रहेको रहस्य खुल्यो र उनी एकाएक भूमिगत भए। गुण्डा नाईके चक्रे मिलनको हात छिनालेपछि मनाङ्गेलगाएत ५ जनालाई मुद्दा चलेको थियो। गुण्डा नाइके गणेश लामासहित ४ जनाले सफाइ पाए पनि मनाङ्गेलाई ५ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। तर उनी प्रहरीको आँखा छलेरै सांसद भए, सांसद जितेर प्रमाणत्र बुझे पनि तर, पछि अपराधी भएको तथ्य बाहिर आएपछि प्रहरीले खोजी थाल्यो। उनी तत्कालै फरार भए। स्रोतका अनुसार उनी सिक्किममा छन्। उनी त्यहाँ रहेको प्रहरीका केही अधिकारीलाई समेत थाहा छ, तर पनि पक्राउ गर्न सकेको छैन। त्यस्तै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द्र ठकुरी पनि प्रहरीको खोजी सूचीमा छन्। सुडान घोटाला काण्डमा भष्ट्राचार गरेको ठहर भएर सर्वोच्चबाट एक वर्ष कैद र ४० हजार जरीवाना सुनाइएका पूर्वआईजीपीनै फरार छन्। उनीसँग अन्य दुई जना पूर्वआईजीपी आफैं अदालतमा हाजिर भए। तर उनी भने फरार छन्।
स्रोतका अनुसार अदालतको समय सकिनु एक दिनअघि पूर्वआईजीपी ठकुरी चालकसहित कोटेश्वरमा गए। कोटेश्वर पुगेपछि प्रहरी चालकलाई घर फर्काएर अर्को गाडी चडेर पूर्व तिर हानिएका उनी अझै फरार छन्। आफू आईजीपी भएका बेला गुन लगाएका प्रहरी अधिकारीको संरक्षणमा उनी फरार छन्। स्रोतका अनुसार उनी राजधानी हरेक साता ओहोरदोहोर गरिरहेका हुन्छन्, तर पनि पक्राउ पर्न सकेको छैनन्। यी त नाम चलेका केही चर्चीत फरार अभयुक्त भए। बाँकी कयौ अभियुक्तहरू राजनीतिक दलको संरक्षणमा खुलेआम घुमिरहे पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन।